Antsirabe-Vakinankaratra: Nahazo toerana fanaovam-pety ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana
mercredi, 16 octobre 2019 20:56
Nankalaza ny andro manerantany ho an’ny « Tehina fotsy », fanao isan-taona isaky ny 15 oktobra ny Fivondronam-ben’ny fikambanana manana fahasembanana ara-pahitana, na ny “Fédération des Associations des Aveugles de Madagascar” na ny FAAM. Ny tanànan’Antsirabe no nosafidian’izy ireo nankalazana izany, satria Antsirabe no misy ny tetikasa « Voatra Asa », natao hanofanana ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana, mba ahafahan’izy ireo mivoatra amin’ny fiainana ka tsy ho vesatra ho an’ny fiaraha-monina.
Nanamarika ny fankalazana tamin’ity ny fitokanana ny « Kolokanto Espace », izay sehatra iray lehibe ahafahana mandray hetsika no sady hikoloana ny kanto sy ny talentan’ireo olona manana fahasembanana.
Fiaraha-miasa tamin’ny CBM sy ny Ambasadin’i Soisa ary ny Principauté de Monaco no nahafahana nanangana ity « Kolokanto Espace » ity, raha toa ka ny faritra Vakinankaratra no nanolotra ny tany nanorenana azy ao amin’ny « Parc de l’Est ».
Azon’ny rehetra ampiasaina amina fikarakarana hetsika ara-kolontsaina ity toerana ity satria natao hitadiavam-bola ho fampandehanana ny asan’ny fikambanan’ny olona manana fahasembanana ihany koa.